Ukuthengisa Okushisayo Okuthengiswa Kwamahhashi Okushicilela Umshini Wokuprinta Izindwangu China Manufacturer
Incazelo:Umshini wokuprinta wendwangu yokuthenga i-Bag Bag,Ibhokisi lokuthenga elomile elomile,Umshini wokuprinta ibha yokuthenga I-Cloth
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-Digital > Iphrinta ye-Bag > Ukuthengisa Okushisayo Okuthengiswa Kwamahhashi Okushicilela Umshini Wokuprinta Izindwangu
Umshini wokuprinta wendwangu yokuthenga i-Bag Bag kushisa kakhulu emakethe, njengoba isebenzisa izinga elijwayelekile lamazwe omhlaba jikelele futhi isebenzisa ama-inks ezivikelayo ezemvelo ezifinyelela ngokuphelele kwizinga eliphakeme lokuhlolwa kwekhwalithi yaseYurophu. Vele uthenge izindleko zekhati elilodwa nge-USD5.00 ngaphandle kwama-logos noma izithombe, bese usebenzisa iphrinta yethu ukuphrinta, izindleko nge-USD0.08. Ungakwazi ukungena ku- USD15 okungenani. I t ibhizinisi elihle kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi iphethini elula, imibala egcwele imibala noma ukuxuba amaphethini, ukuphrinta kuphela isikhathi esisodwa, akudingeki ukuba wenze ifilimu ngezinqubo ezimbalwa. Isikhwama se-Shoppijng nezicathulo zilungile ukuphrinta. Emva kokuthenga le phrinta, uzothola izikhwama ezingaphezulu.
1. Ukuthenga Umshini Wokushicilela Umshini Umshini , le phrinta kulula kakhulu ukusebenza.
2. Isigqoko sokuthenga esomile esiqinile, isivinini esikhulu. Umhlophe nombala ophrintiwe ngesikhathi esisodwa. Siyakwamukela ukuxhumana nami uma unesithakazelo kumaphrinta ethu
Umshini wokuprinta wendwangu yokuthenga i-Bag Bag Ibhokisi lokuthenga elomile elomile Umshini wokuprinta ibha yokuthenga I-Cloth Umshini Wokuphrinta Wendwangu Ethebula Umshini wokuphrinta wezinkuni Ukuqondisa kumshini wokuprinta ibha yokuthenga Umshini wokunyathelisa ibha yokuthenga Umshini wokuphrinta wekhanda le-Digital